नेपाल आज | के हो ग्यास्ट्रिक? जान्नुहोस् जोगिने उपाय
काठमाडौं । पेटमा हुने एक प्रकारको इन्फेक्सनलाई अम्लपित्त अर्थात् ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ । यसले हाम्रो पेटमा एक किसिमको एसिड (अम्ल) उत्पादन गर्छ । जसले खाना पचाउनेदेखि लिएर पेटमा भएका व्याक्टेरियालाई मार्नेसम्मको काम गर्छ । यदि पेटमा अम्ल उत्पादन बढी भएमा त्यसले तन्तु जलाउँछ । जसलाई सामान्य भाषामा ग्यास्ट्रिक भएको भनिन्छ ।
ग्यास्ट्रिक हुने कारण
ग्यास्ट्रिक हुने प्रमुख कारण खानपानमा गडबडी नै हो । जे पायो त्यही खाने, कहिले धेरै खाने, कहिले खानै नखाने, बढी मसलेदार खाना खादा पनि ग्यास्ट्रिक हुन्छ । तारेको, भुटेको, फास्टफुड, जंकफुडको अत्यधिक सेवनले पनि ग्यास्ट्रिक हुन्छ । दीर्घरोगमा सेवन गरिने कतिपय औषधिले पनि ग्यास्ट्रिक हुन सक्छ । खासगरी पेनकिलर बढी खाएमा ग्यास्ट्रि हुन्छ । सुर्तीजन्य पदार्थ, लागूपदार्थ र मदिरा सेवनका कारणसमेत ग्यास्ट्रिक हुन्छ । कहिलेकाहीँ तनावका कारणले पनि यस्तो हुन्छ । पेटको र खाद्यनलीको क्यान्सर भएमा पनि ग्यास्ट्रिक हुने गर्छ ।
यी हुन् बच्चे उपाय
समयमा खाना खाने वा सन्तुलित आहार गर्ने हो भने ग्यास्ट्रिकबाट बच्न सकिन्छ । यसबाहेक अत्यधिक चिल्लो, पिरो र अमिलो खानेकुरा नखाने । अर्थात् साधारण खानाको सेवनले ग्यास्ट्रिक हुनबाट बचाउँछ । रक्सी, चुरोटजस्ता पदार्थको सेवन नगर्ने र चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र औषधि सेवन गर्नाले पनि ग्यास्ट्रिबाट बच्न सकिन्छ । यो जानकारी नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो । जसलाई जनरल सर्जन डा. सागर रिमालले लेखेका हुन् ।